Jariyan al Batnah (pre-2004)[ပယ်ချ]
Australia (continental including Tasmania)[အစုလိုက်]
Lord Howe Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
New South Wales[အစုလိုက်]
Tweed - Tweed Coast[အစုလိုက်]
Tweed - Tweed-Heads[အစုလိုက်]
Tweed - Pt B[အစုလိုက်]
Lismore - Pt A[အစုလိုက်]
Lismore - Pt B[အစုလိုက်]
Richmond Valley Bal[အစုလိုက်]
Inverell - Pt A[အစုလိုက်]
Inverell - Pt B[အစုလိုက်]
Clarence Valley Bal[အစုလိုက်]
Clarence Valley- Coast[အစုလိုက်]
Clarence Valley- Grafton[အစုလိုက်]
Glen Innes Severn[အစုလိုက်]
Coffs Harbour - Pt B[အစုလိုက်]
Coffs Harbour - Pt A[အစုလိုက်]
Armidale Dumaresq Bal[အစုလိုက်]
Tamworth Regional - Pt B[အစုလိုက်]
Unincorp. Far West[အစုလိုက်]
Port Macquarie-Hastings - Pt A[အစုလိုက်]
Port Macquarie-Hastings - Pt B[အစုလိုက်]
Upper Hunter Shire[အစုလိုက်]
Dubbo - Pt A[အစုလိုက်]
Dubbo - Pt B[အစုလိုက်]
Mid-Western Regional - Pt A[အစုလိုက်]
Mid-Western Regional - Pt B[အစုလိုက်]
Newcastle - Inner City[အစုလိုက်]
Newcastle - Outer West[အစုလိုက်]
Newcastle - Throsby[အစုလိုက်]
Lake Macquarie - North[အစုလိုက်]
Lake Macquarie - East[အစုလိုက်]
Lake Macquarie - West[အစုလိုက်]
Wyong - North-East[အစုလိုက်]
Wyong - South and West[အစုလိုက်]
Bathurst Regional - Pt B[အစုလိုက်]
Gosford - East[အစုလိုက်]
Gosford - West[အစုလိုက်]
Baulkham Hills - North[အစုလိုက်]
Baulkham Hills - South[အစုလိုက်]
Baulkham Hills - Central[အစုလိုက်]
Hornsby - North[အစုလိုက်]
Blacktown - North[အစုလိုက်]
Blacktown - South-East[အစုလိုက်]
Blacktown - South-West[အစုလိုက်]
Canada Bay - Concord[အစုလိုက်]
Parramatta - Inner[အစုလိုက်]
Parramatta - North-East[အစုလိုက်]
Penrith - East[အစုလိုက်]
Penrith - West[အစုလိုက်]
Sydney - Inner[အစုလိုက်]
Sydney - South[အစုလိုက်]
Sydney - West[အစုလိုက်]
Bankstown - North-East[အစုလိုက်]
Bankstown - North-West[အစုလိုက်]
Bankstown - South[အစုလိုက်]
Fairfield - East[အစုလိုက်]
Fairfield - West[အစုလိုက်]
Sutherland Shire - East[အစုလိုက်]
Sutherland Shire - West[အစုလိုက်]
Liverpool - East[အစုလိုက်]
Liverpool - West[အစုလိုက်]
Campbelltown - North[အစုလိုက်]
Campbelltown - South[အစုလိုက်]
Wollongong - Inner[အစုလိုက်]
Upper Lachlan Shire[အစုလိုက်]
Goulburn Mulwaree - Goulburn[အစုလိုက်]
Goulburn Mulwaree Bal[အစုလိုက်]
Shoalhaven - Pt B[အစုလိုက်]
Wagga Wagga - Pt A[အစုလိုက်]
Wagga Wagga - Pt B[အစုလိုက်]
Palerang - Pt A[အစုလိုက်]
Palerang - Pt B[အစုလိုက်]
Greater Hume Shire - Pt A[အစုလိုက်]
Greater Hume Shire - Pt B[အစုလိုက်]
New South Wales - Australian Alps[အစုလိုက်]
New South Wales - Brigalow Belt South[အစုလိုက်]
New South Wales - Broken Hill Complex[အစုလိုက်]
New South Wales - Channel Country[အစုလိုက်]
New South Wales - Cobar Peneplain[အစုလိုက်]
New South Wales - Darling Riverine Plains[အစုလိုက်]
New South Wales - Murray Darling Depression[အစုလိုက်]
New South Wales - Mulga Lands[အစုလိုက်]
New South Wales - Nandewar[အစုလိုက်]
New South Wales - New England Tablelands[အစုလိုက်]
New South Wales - NSW North Coast[အစုလိုက်]
New South Wales - NSW South Western Slopes[အစုလိုက်]
New South Wales - Riverina[အစုလိုက်]
New South Wales - South East Corner[အစုလိုက်]
New South Wales - South Eastern Highlands[အစုလိုက်]
New South Wales - South Eastern Queensland[အစုလိုက်]
New South Wales - Simpson Strzelecki Dunefields[အစုလိုက်]
New South Wales - Sydney Basin[အစုလိုက်]
Australian Capital Territory[အစုလိုက်]
Australian Capital Territory (excl. Jervis Bay)[အစုလိုက်]
Gungahlin-Hall - SSD Bal[အစုလိုက်]
Belconnen Town Centre[အစုလိုက်]
Belconnen - SSD Bal[အစုလိုက်]
Weston Creek-Stromlo - SSD Bal[အစုလိုက်]
Tuggeranong - SSD Bal[အစုလိုက်]
Remainder of ACT[အစုလိုက်]
Australian Capital Territory - Australian Alps[အစုလိုက်]
Australian Capital Territory - South Eastern Highlands[အစုလိုက်]
Litchfield - Pt A[အစုလိုက်]
Litchfield - Pt B[အစုလိုက်]
City - Inner[အစုလိုက်]
City - Remainder[အစုလိုက်]
Lee Point-Leanyer Swamp[အစုလိုက်]
Nyirranggulung Mardrulk Ngadberre[အစုလိုက်]
Tennant Creek - Bal[အစုလိုက်]
Alice Springs- Heavitree[အစုလိုက်]
Unincorporated Northern Territories[အစုလိုက်]
Northeast Top End[အစုလိုက်]
Northern Territory - Arnhem Coast[အစုလိုက်]
Northern Territory - Arnhem Plateau[အစုလိုက်]
Northern Territory - Burt Plain[အစုလိုက်]
Northern Territory - Central Arnhem[အစုလိုက်]
Northern Territory - Central Ranges[အစုလိုက်]
Northern Territory - Channel Country[အစုလိုက်]
Northern Territory - Daly Basin[အစုလိုက်]
Northern Territory - Darwin Coastal[အစုလိုက်]
Northern Territory - Davenport Murchison Ranges[အစုလိုက်]
Northern Territory - Finke[အစုလိုက်]
Northern Territory - Gulf Fall and Uplands[အစုလိုက်]
Northern Territory - Great Sandy Desert[အစုလိုက်]
Northern Territory - Gulf Coastal[အစုလိုက်]
Northern Territory - MacDonnell Ranges[အစုလိုက်]
Northern Territory - Mitchell Grass Downs[အစုလိုက်]
Northern Territory - Ord Victoria Plain[အစုလိုက်]
Northern Territory - Pine Creek[အစုလိုက်]
Northern Territory - Simpson Strzelecki Dunefields[အစုလိုက်]
Northern Territory - Tanami[အစုလိုက်]
Northern Territory - Victoria Bonaparte[အစုလိုက်]
Northern Peninsula Area[အစုလိုက်]
Cairns - Barron[အစုလိုက်]
Cairns - Northern Suburbs[အစုလိုက်]
Cairns - Trinity[အစုလိုက်]
Cairns - City[အစုလိုက်]
Cairns - Central Suburbs[အစုလိုက်]
Cairns - Western Suburbs[အစုလိုက်]
Cairns - Mt Whitfield[အစုလိုက်]
Cairns - Pt B[အစုလိုက်]
Townsville - Pt B[အစုလိုက်]
Thuringowa - Pt A Bal[အစုလိုက်]
Thuringowa - Pt B[အစုလိုက်]
Mt Louisa-Mt St John-Bohle[အစုလိုက်]
Rowes Bay-Belgian Gardens[အစုလိုက်]
North Ward-Castle Hill[အစုလိုက်]
Brookfield (incl. Brisbane Forest Park)[အစုလိုက်]
Eight Mile Plains[အစုလိုက်]
Fig Tree Pocket[အစုလိုက်]
Holland Park West[အစုလိုက်]
Karana Downs-Lake Manchester[အစုလိုက်]
Seventeen Mile Rocks[အစုလိုက်]
Mackay - Pt A[အစုလိုက်]
Mackay - Pt B[အစုလိုက်]
Livingstone - Pt A[အစုလိုက်]
Livingstone - Pt B[အစုလိုက်]
Fitzroy - Pt A[အစုလိုက်]
Fitzroy - Pt B[အစုလိုက်]
Calliope - Pt B[အစုလိုက်]
Burnett - Pt A[အစုလိုက်]
Burnett - Pt B[အစုလိုက်]
Hervey Bay - Pt B[အစုလိုက်]
Hervey Bay - Pt A[အစုလိုက်]
Cooloola (excl. Gympie)[အစုလိုက်]
Cooloola - Gympie only[အစုလိုက်]
Caloundra - Caloundra N.[အစုလိုက်]
Caloundra - Caloundra S.[အစုလိုက်]
Caloundra - Hinterland[အစုလိုက်]
Caloundra - Kawana[အစုလိုက်]
Caloundra - Rail Corridor[အစုလိုက်]
Maroochy - Buderim[အစုလိုက်]
Maroochy - Coastal North[အစုလိုက်]
Maroochy - Maroochydore[အစုလိုက်]
Maroochy - Mooloolaba[အစုလိုက်]
Maroochy - Nambour[အစုလိုက်]
Maroochy - Paynter-Petrie Creek[အစုလိုက်]
Noosa - Noosa-Noosaville[အစုလိုက်]
Noosa - Sunshine-Peregian[အစုလိုက်]
Noosa - Tewantin[အစုလိုက်]
Caboolture - Central[အစုလိုက်]
Caboolture - East[အစုလိုက်]
Caboolture - Hinterland[အစုလိုက်]
Caboolture - Midwest[အစုလိုက်]
Central Pine West[အစုလိုက်]
Pine Rivers Bal[အစုလိုက်]
Paradise Point-Runaway Bay[အစုလိုက်]
Main Beach-South Stradbroke[အစုလိုက်]
Ipswich - Central[အစုလိုက်]
Ipswich - East[အစုလိုက်]
Ipswich - North[အစုလိုက်]
Ipswich - South-West[အစုလိုက်]
Ipswich - West[အစုလိုက်]
Toowoomba - North-West[အစုလိုက်]
Toowoomba - North-East[အစုလိုက်]
Toowoomba - South-East[အစုလိုက်]
Toowoomba - West[အစုလိုက်]
Cambooya - Pt A[အစုလိုက်]
Cambooya - Pt B[အစုလိုက်]
Crow's Nest - Pt A[အစုလိုက်]
Crow's Nest - Pt B[အစုလိုက်]
Jondaryan - Pt A[အစုလိုက်]
Jondaryan - Pt B[အစုလိုက်]
Rosalie - Pt A[အစုလိုက်]
Rosalie - Pt B[အစုလိုက်]
Beaudesert - Pt A[အစုလိုက်]
Beaudesert - Pt C[အစုလိုက်]
Beaudesert - Pt B[အစုလိုက်]
Warwick - West[အစုလိုက်]
Warwick - North[အစုလိုက်]
Warwick - Central[အစုလိုက်]
Warwick - East[အစုလိုက်]
Queensland - Brigalow Belt North[အစုလိုက်]
Queensland - Brigalow Belt South[အစုလိုက်]
Queensland - Channel Country[အစုလိုက်]
Queensland - Central Mackay Coast[အစုလိုက်]
Queensland - Cape York Peninsula[အစုလိုက်]
Queensland - Desert Uplands[အစုလိုက်]
Queensland - Darling Riverine Plains[အစုလိုက်]
Queensland - Einasleigh Uplands[အစုလိုက်]
Queensland - Gulf Fall and Uplands[အစုလိုက်]
Queensland - Gulf Plains[အစုလိုက်]
Queensland - Mitchell Grass Downs[အစုလိုက်]
Queensland - Mount Isa Inlier[အစုလိုက်]
Queensland - Mulga Lands[အစုလိုက်]
Queensland - Nandewar[အစုလိုက်]
Queensland - New England Tablelands[အစုလိုက်]
Queensland - South Eastern Queensland[အစုလိုက်]
Queensland - Simpson Strzelecki Dunefields[အစုလိုက်]
Queensland - Wet Tropics[အစုလိုက်]
Unincorporated South Australia[အစုလိုက်]
Unincorp. Flinders Ranges[အစုလိုက်]
Unincorp. Far North[အစုလိုက်]
Unincorp. West Coast[အစုလိုက်]
Mount Remarkable (DC)[အစုလိုက်]
Port Pirie City and Dists[အစုလိုက်]
Port Pirie C Dists - City[အစုလိုက်]
Port Pirie C Dists Bal[အစုလိုက်]
Renmark Paringa - Paringa[အစုလိုက်]
Renmark Paringa - Renmark[အစုလိုက်]
Clare and Gilbert Valleys[အစုလိုက်]
Berri and Barmera[အစုလိုက်]
Berri & Barmera - Barmera[အစုလိုက်]
Berri & Barmera - Berri[အစုလိုက်]
Barossa - Angaston[အစုလိုက်]
Barossa - Barossa[အစုလိုက်]
Barossa - Tanunda[အစုလိုက်]
Yorke Peninsula - North[အစုလိုက်]
Yorke Peninsula - South[အစုလိုက်]
Loxton Waikerie - East[အစုလိုက်]
Loxton Waikerie - West[အစုလိုက်]
Playford - West[အစုလိုက်]
Lower Eyre Peninsula[အစုလိုက်]
Karoonda East Murray[အစုလိုက်]
Adelaide Hills - North[အစုလိုက်]
Adelaide Hills -Ranges[အစုလိုက်]
Tea Tree Gully[အစုလိုက်]
Tea Tree Gully - Central[အစုလိုက်]
Salisbury - Central[အစုလိုက်]
Salisbury - North-East[အစုလိုက်]
Port Adelaide Enfield[အစုလိုက်]
Port Adel. Enfield - Coast[အစုလိုက်]
Port Adel. Enfield - Park[အစုလိုက်]
Port Adel. Enfield - Port[အစုလိုက်]
Burnside - South-West[အစုလိုက်]
Burnside - North-East[အစုလိုက်]
West Torrens - East[အစုလိုက်]
West Torrens - West[အစုလိုက်]
Charles Sturt - Coastal[အစုလိုက်]
Mount Barker - Central[အစုလိုက်]
Mount Barker Bal[အစုလိုက်]
Mitcham - Hills[အစုလိုက်]
Holdfast Bay - North[အစုလိုက်]
Holdfast Bay - South[အစုလိုက်]
Marion - South[အစုလိုက်]
Marion - Central[အစုလိုက်]
Onkaparinga - Hackham[အစုလိုက်]
Onkaparinga - Hills[အစုလိုက်]
Onkaparinga - North Coast[အစုလိုက်]
Onkaparinga - Reservoir[အစုလိုက်]
Onkaparinga - South Coast[အစုလိုက်]
Onkaparinga - Woodcroft[အစုလိုက်]
Alexandrina - Coastal[အစုလိုက်]
Wattle Range - West[အစုလိုက်]
Wattle Range - East[အစုလိုက်]
South Australia - Broken Hill Complex[အစုလိုက်]
South Australia - Channel Country[အစုလိုက်]
South Australia - Eyre Yorke Block[အစုလိုက်]
South Australia - Flinders Lofty Block[အစုလိုက်]
South Australia - Gawler[အစုလိုက်]
South Australia - Kanmantoo[အစုလိုက်]
South Australia - Murray Darling Depression[အစုလိုက်]
South Australia - Naracoorte Coastal Plain[အစုလိုက်]
South Australia - Nullarbor[အစုလိုက်]
South Australia - Riverina[အစုလိုက်]
South Australia - Simpson Strzelecki Dunefields[အစုလိုက်]
South Australia - Stony Plains[အစုလိုက်]
South Australia - Southern Volcanic Plain[အစုလိုက်]
Tasmania[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Flinders[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Circular Head[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Dorset[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Burnie[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Burnie - Pt A[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Burnie - Pt B[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Waratah/Wynyard[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Waratah/Wynyard - Pt A[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Waratah/Wynyard - Pt B[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
George Town - Pt A[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
George Town - Pt B[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
West Tamar[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
West Tamar - Pt A[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
West Tamar - Pt B[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Latrobe[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Latrobe - Pt A[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Latrobe - Pt B[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Devonport[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Central Coast[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Central Coast - Pt A[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Central Coast - Pt B[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Break O'Day[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Launceston[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Launceston - Pt B[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Launceston - Pt C[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Kentish[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Northern Midlands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Northern Midlands - Pt A[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Northern Midlands - Pt B[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Meander Valley[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Central Highlands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Glamorgan-Spring Bay[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Southern Midlands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
West Coast[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Brighton[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Glenorchy[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Derwent Valley[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Sorell[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Clarence[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Hobart[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Kingborough[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Huon Valley[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Tasmania - Ben Lomond[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Tasmania - Furneaux[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Tasmania - King[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Tasmania - Tasmanian Central Highlands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Tasmania - Tasmanian Northern Midlands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Tasmania - Tasmanian Northern Slopes[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Tasmania - Tasmanian South East[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Tasmania - Tasmanian Southern Ranges[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Tasmania - Tasmanian West[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Mildura - Pt A[အစုလိုက်]
Mildura - Pt B[အစုလိုက်]
Swan Hill - Central[အစုလိုက်]
Swan Hill - Robinvale[အစုလိုက်]
Swan Hill Bal[အစုလိုက်]
Yarriambiack - North[အစုလိုက်]
Yarriambiack - South[အစုလိုက်]
Buloke - North[အစုလိုက်]
Buloke - South[အစုလိုက်]
Moira - East[အစုလိုက်]
Moira - West[အစုလိုက်]
Campaspe - Echuca[အစုလိုက်]
Campaspe - Kyabram[အစုလိုက်]
Campaspe - Rochester[အစုလိုက်]
Campaspe - South[အစုလိုက်]
Towong - Pt A[အစုလိုက်]
Towong - Pt B[အစုလိုက်]
Loddon - North[အစုလိုက်]
Loddon - South[အစုလိုက်]
Indigo - Pt A[အစုလိုက်]
Indigo - Pt B[အစုလိုက်]
Wangaratta - Central[အစုလိုက်]
Wangaratta - North[အစုလိုက်]
Wangaratta - South[အစုလိုက်]
Greater Shepparton - Pt B East[အစုလိုက်]
Greater Shepparton - Pt A[အစုလိုက်]
Greater Shepparton - Pt B West[အစုလိုက်]
Benalla - Benalla[အစုလိုက်]
Greater Bendigo - Pt B[အစုလိုက်]
Greater Bendigo - Strathfieldsaye[အစုလိုက်]
Northern Grampians - St Arnaud[အစုလိုက်]
Northern Grampians - Stawell[အစုလိုက်]
Horsham - Central[အစုလိုက်]
Alpine - East[အစုလိုက်]
Mitchell - North[အစုလိုက်]
Mitchell - South[အစုလိုက်]
Central Goldfields Ballarat[အစုလိုက်]
Mount Buller Alpine Resort[အစုလိုက်]
Falls Creek Alpine Resort[အစုလိုက်]
Lady Julia Percy Island[အစုလိုက်]
Mount Alexander Ballan[အစုလိုက်]
Murrindindi - East[အစုလိုက်]
Murrindindi - West[အစုလိုက်]
Macedon Ranges - Kyneton[အစုလိုက်]
Macedon Ranges - Romsey[အစုလိုက်]
Macedon Ranges Bal[အစုလိုက်]
East Gippsland - Bairnsdale[အစုလိုက်]
East Gippsland - Orbost[အစုလိုက်]
East Gippsland - South-West[အစုလိုက်]
East Gippsland Bal[အစုလိုက်]
Hepburn - East[အစုလိုက်]
Hepburn - West[အစုလိုက်]
Southern Grampians - Wannon[အစုလိုက်]
Southern Grampians Bal[အစုလိုက်]
Southern Grampians - Hamilton[အစုလိုက်]
Ballarat - North[အစုလိုက်]
Ballarat - Inner North[အစုလိုက်]
Ballarat - Central[အစုလိုက်]
Ballarat - South[အစုလိုက်]
Moorabool - Ballan[အစုလိုက်]
Moorabool - West[အစုလိုက်]
Moorabool - Bacchus Marsh[အစုလိုက်]
Yarra Ranges - North[အစုလိုက်]
Yarra Ranges - Central[အစုလိုက်]
Yarra Ranges - Seville[အစုလိုက်]
Yarra Ranges - Lilydale[အစုလိုက်]
Whittlesea - North[အစုလိုက်]
Whittlesea - South-East[အစုလိုက်]
Whittlesea - South-West[အစုလိုက်]
Pyrenees - North[အစုလိုက်]
Pyrenees - South[အစုလိုက်]
Manningham - East[အစုလိုက်]
Manningham - West[အစုလိုက်]
Nillumbik - South-West[အစုလိုက်]
Nillumbik - South[အစုလိုက်]
Banyule - North[အစုလိုက်]
Banyule - Heidelberg[အစုလိုက်]
Darebin - Preston[အစုလိုက်]
Moreland - Coburg[အစုလိုက်]
Moreland - North[အစုလိုက်]
Moreland - Brunswick[အစုလိုက်]
Hume - Broadmeadows[အစုလိုက်]
Hume - Craigieburn[အစုလိုက်]
Hume - Sunbury[အစုလိုက်]
Moonee Valley - West[အစုလိုက်]
Moonee Valley - Essendon[အစုလိုက်]
Brimbank - Keilor[အစုလိုက်]
Brimbank - Sunshine[အစုလိုက်]
Melton - East[အစုလိုက်]
Glenelg - North[အစုလိုက်]
Glenelg - Portland[အစုလိုက်]
Glenelg - Heywood[အစုလိုက်]
Maroondah - Croydon[အစုလိုက်]
Maroondah - Ringwood[အစုလိုက်]
Whitehorse - Box Hill[အစုလိုက်]
Whitehorse - Nunawading East[အစုလိုက်]
Boroondara - Camberwell North[အစုလိုက်]
Boroondara - Kew[အစုလိုက်]
Yarra - North[အစုလိုက်]
Yarra - Richmond[အစုလိုက်]
Stonnington - Malvern[အစုလိုက်]
Stonnington - Prahran[အစုလိုက်]
Melbourne - Inner[အစုလိုက်]
Melbourne - Remainder[အစုလိုက်]
Port Phillip - West[အစုလိုက်]
Port Phillip - St Kilda[အစုလိုက်]
Golden Plains - North-West[အစုလိုက်]
Golden Plains - South-East[အစုလိုက်]
Baw Baw - Pt B East[အစုလိုက်]
Baw Baw - Pt B West[အစုလိုက်]
Baw Baw - Pt A[အစုလိုက်]
Yarra Ranges - Dandenongs[အစုလိုက်]
Knox - North-East[အစုလိုက်]
Knox - North-West[အစုလိုက်]
Knox - South[အစုလိုက်]
Monash - Waverley East[အစုလိုက်]
Monash - Waverley West[အစုလိုက်]
Monash - South-West[အစုလိုက်]
Glen Eira - Caulfield[အစုလိုက်]
Glen Eira - South[အစုလိုက်]
Bayside - South[အစုလိုက်]
Hobsons Bay - Altona[အစုလိုက်]
Hobsons Bay - Williamstown[အစုလိုက်]
Wyndham - North[အစုလိုက်]
Wyndham - South[အစုလိုက်]
Wyndham - West[အစုလိုက်]
Moyne - North-East[အစုလိုက်]
Moyne - North-West[အစုလိုက်]
Moyne - South[အစုလိုက်]
Cardinia - North[အစုလိုက်]
Cardinia - Pakenham[အစုလိုက်]
Cardinia - South[အစုလိုက်]
Casey - Berwick[အစုလိုက်]
Casey - Hallam[အစုလိုက်]
Casey - Cranbourne[အစုလိုက်]
Casey - South[အစုလိုက်]
Greater Dandenong - Dandenong[အစုလိုက်]
Greater Dandenong Bal[အစုလိုက်]
Kingston - North[အစုလိုက်]
Kingston - South[အစုလိုက်]
Greater Geelong - Pt C[အစုလိုက်]
Greater Geelong - Pt B[အစုလိုက်]
Corio - Inner[အစုလိုက်]
South Barwon - Inner[အစုလိုက်]
Bellarine - Inner[အစုလိုက်]
Corangamite - North[အစုလိုက်]
Corangamite - South[အစုလိုက်]
Frankston - East[အစုလိုက်]
Frankston - West[အစုလိုက်]
Latrobe - Traralgon[အစုလိုက်]
Latrobe - Moe[အစုလိုက်]
Latrobe - Morwell[အစုလိုက်]
Mornington Peninsula - West[အစုလိုက်]
Mornington Peninsula - East[အစုလိုက်]
Mornington Peninsula - South[အစုလိုက်]
Surf Coast - East[အစုလိုက်]
Surf Coast - West[အစုလိုက်]
South Gippsland - West[အစုလိုက်]
South Gippsland - Central[အစုလိုက်]
South Gippsland - East[အစုလိုက်]
Colac-Otway - North[အစုလိုက်]
Colac-Otway - South[အစုလိုက်]
Bass Coast Bal[အစုလိုက်]
Bass Coast - Phillip Island[အစုလိုက်]
Wellington - Alberton[အစုလိုက်]
Wellington - Avon[အစုလိုက်]
Wellington - Maffra[အစုလိုက်]
Wellington - Rosedale[အစုလိုက်]
Wellington - Sale[အစုလိုက်]
Victoria - Australian Alps[အစုလိုက်]
Victoria - Furneaux[အစုလိုက်]
Victoria - Murray Darling Depression[အစုလိုက်]
Victoria - Naracoorte Coastal Plain[အစုလိုက်]
Victoria - NSW South Western Slopes[အစုလိုက်]
Victoria - Riverina[အစုလိုက်]
Victoria - South East Coastal Plain[အစုလိုက်]
Victoria - South East Corner[အစုလိုက်]
Victoria - South Eastern Highlands[အစုလိုက်]
Victoria - Southern Volcanic Plain[အစုလိုက်]
Victoria - Victorian Midlands[အစုလိုက်]
Kings Billabong Wildlife Reserve[အစုလိုက်]
Murray Sunset National Park[အစုလိုက်]
Hattah-Kullkyne National Park[အစုလိုက်]
Wyperfeld National Park[အစုလိုက်]
Lake Albacutya Park[အစုလိုက်]
Big Desert Wilderness[အစုလိုက်]
Little Desert National Park[အစုလိုက်]
Western Australia (North)[အစုလိုက်]
Western Australia (South)[အစုလိုက်]
Geraldton (excl. Pelsaert Islands)[အစုလိုက်]
Western Australia - Avon Wheatbelt[အစုလိုက်]
Western Australia - Carnarvon[အစုလိုက်]
Western Australia - Central Kimberley[အစုလိုက်]
Western Australia - Central Ranges[အစုလိုက်]
Western Australia - Coolgardie[အစုလိုက်]
Western Australia - Dampierland[အစုလိုက်]
Western Australia - Esperance Plains[အစုလိုက်]
Western Australia - Geraldton Sandplains[အစုလိုက်]
Western Australia - Great Sandy Desert[အစုလိုက်]
Western Australia - Great Victoria Desert[အစုလိုက်]
Western Australia - Hampton[အစုလိုက်]
Western Australia - Jarrah Forest[အစုလိုက်]
Western Australia - Little Sandy Desert[အစုလိုက်]
Western Australia - Mallee[အစုလိုက်]
Western Australia - Murchison[အစုလိုက်]
Western Australia - Northern Kimberley[အစုလိုက်]
Western Australia - Nullarbor[အစုလိုက်]
Western Australia - Ord Victoria Plain[အစုလိုက်]
Western Australia - Pilbara[အစုလိုက်]
Western Australia - Swan Coastal Plain[အစုလိုက်]
Western Australia - Victoria Bonaparte[အစုလိုက်]
Western Australia - Warren[အစုလိုက်]
Western Australia - Yalgoo[အစုလိုက်]
Avibase သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး 285,959,292 24 ဇွန်လ 2003 ကတည်းကကြိမ်. © Denis Lepage | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ